ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: စက်မှုတက္ကသိုလ်ဘောလုံးပွဲများ……(၁)
RIT ကလူတွေက တယ်ရန်လို တာကိုးနော်။ :)
ဒီပို့စ်လေးက ကျောင်းသားဘ၀ကို ပြန်ရလို့ ကြည်နူးစရာပါပဲ။ ချိုသင်းတို့ Geology တွေလဲ တောကျီးတွေလိုပဲ၊ အရမ်း ရန်ဖြစ်တယ်။ တယောက်ကိုထိရင် ချမယ်ပဲ။
ကို နဗနကတော့ မပြောပါနဲ့တော့၊ မနက်ဆို သူ့စာ မဖတ်ဘဲ အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး။ good mood ရအောင် ဒီလိုပဲ လုပ်ရမယ် ထင်ပါရဲ့လေ။
ကိုပေါရေ… (၁) ဆိုတော့ ၂၊၃၊၄ တွေ လာဦးမှာပေ့ါ… ပျော်လိုက်တာ…
ECဗိုလ်စွဲတော့ ကျောင်းမှာ မရှိတော့တာနာတယ်…
ကျွန်မတို့ တုန်းက ဆီမီးဖိုင်နယ်နဲ့ ရပ်ရပ်သွားတာ… Civilနဲ့ ကန်တုန်းက ECရှုံးတော့ Civilအတန်းရှေ့ က တပတ်လောက်ဖြတ်မလျှောက်တာ သတိရတယ်… LCRထဲမှာ သူတို့ နဲ့ တွေ့ တောင် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာ… မရဘူးလေ… သူတို့ ကလဲ ဒါပဲစကားစချင်နေတာကို…
ကျွန်မတို့ ကွင်းထဲသွားအားပေးတော့ ဆရာဦးမျိုးကြည်ဆို အရမ်းကို အင်တိုက်အားတိုက်အားပေးတာ အသံတွေ ၀င်တဲ့အထိပဲ…
ကိုနဗနတို့ကိုပေါတို့ … ကိုနဗနစကားနဲ့ ပြောရရင် ECကဘာညာကွိကွတွေ နဲ့ ဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ပြန်ဆုံရတာ ကျောင်းပြန်တက်ရသလိုပဲ… ပျော်တယ်.. လွမ်းတယ်…
Civil ကဆိုလို့ ဖေမောင်သိန်း(ကာတွန်း ဦးဖေသိန်းရဲ့သားကြီး)-(ခုဆုံးရှာပြီ)နဲ့ ကိုပေါတို့ ဘသူစောပါလိမ့်။ ဂျီဟောရှေ့က ဘောလုံးကွင်းထဲ 'သိန်း'ဘောလုံးကန်ကန်နေတာ သတိရမိတယ်။
စက်မှု၊ အီးစီ၊ မြို့ ပြလို မေဂျာကြီးတွေ ဗိုလ်စွဲတာ သိပ်မဆန်းပါဘူးဗျာ။
သိပ်ကောင်းတဲ့ လူတွေ မေဂျာလေးတွေမှာ ရှိနေတာလဲထည့် ရေးပါဦး။ ဒါမှ မျှမျှတတဖြစ်ပေမပေါ့..
ဝိုင်အိုင်တီက ဘောလုံးပွဲဆိုတာ လက်ဖျားခါလောက်ရဲ့..
အောင်ဆန်းက ဒိုင်တွေလာပြီး ကြီးကြပ်ပေးတယ်..
ကိုပေါတို့ ၄တန်းတို့က... မှတ်မိလား...
အဲဒီတုံးက Electrical( EC+EP) အသင်းဘဲရှိသေးတယ်..
Civil နဲ့ကန်တဲ့ပွဲ... ပယ်နယ်တီနဲ့ဘဲ ရှုံးတယ်ထင်ရဲ့...
ဒါနဲ့ စကားမစပ်... စိန်ရတုပွဲတုံးက ဂေါ်ရခါးသီးတွေကို..
ဘူးသီးကြော်ဆိုပြီး ညာရောင်းခဲ့တာလေးတွေ ပြန်ရေးစမ်းပါဦးကွဲ့....
မမိုးချိုသင်း..........တွေ့တယ်မို့လား၊ အောက်မှာ ကမောင်ရင် ရဲ့ မှတ်ချက်ကို။ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုတာ အဲသလို စွာတာဗျ။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းတုန်းကတော့ ကျနော်က လုပ်တိုင်းခံကလေးပါ။ အခုမှ စွာတတ်အောင် မနည်း လေ့ကျင့်သင်ယူထားရတာ။း-)
ဒေါ်တန်ခူး………(၁) လို့ တပ်ထားတဲ့အတွက် (၂) နဲ့ (၃) က တော့လာမှာပါ။ (၄) တွေ (၅) တွေကတော့ မသေချာဘူး။ အရင်ကလည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ နံပါတ်တွေတပ်ပြီး တပိုင်းတစ ထားခဲ့တဲ့ အကျင့်လေးက ရှိတော့…..အာမ မခံရဲဘူးဗျိုး။
ဒေါ်မေငြိမ်း……. (မြန်မာတီးရှော့ပ်မှာ မောင်ဆန်ခေါ်သလို ခေါ်လိုက်တယ်နော်။) ကျနော်က ၁၉၉၆ မှာ ကျောင်းပြီးတာပါ။ ဆရာဦးဖေသိန်းသားကို ကျနော်မသိလိုက်ဘူး။ မေဂျာမတူတာကြောင့်လား၊ သူက စောလို့လား မသိ။ ကမောင်ရင်တို့လို ရှေးအဖိုးကြီးတွေတော့ သိကောင်းသိမယ်။
ကမောင်ရင်……. မေဂျာလေးတွေမှာ ချွန်တဲ့လူတွေ ရှိတာ အငြင်းပွားဘွယ် မရှိပါဗျိုး။
ကေတီဂျီ (ခေါ်) အင်န်တီတီအင်န်……… မြို့ပြနဲ့ ပွဲတုန်းက ရှုံးရတာ အဲသည်တုန်းက အသင်း အတွင်းရေးမှူးလုပ်တဲ့သူ ဖွန်ကြောင်နေလို့ လို့ ကြားဘူးတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး…ဟီးဟီး။ စက်မှုတက္ကသိုလ် မုသာဝါဒါမိသားစုက ဂေါ်ရဂါးသီးကြော်ကို ဘူးသီးကြော်အဖြစ် ညာရောင်းတဲ့အကြောင်း ရေးဘို့ စိတ်ကူးရှိပါသဗျိုး။
၅တန်း နဲ့ ၆တန်းပါ၊ ဟုတ်တယ်ဟုတ်?
ကျောင်းအကြောင်းတွေ ဖတ်ရတော့လွမ်းတယ်။ ကျောင်းကြီးမှာ မတက်ရတော့ စိတ်နာတယ်။ အခုလို အလွမ်းပြေ ကျောင်းအကြောင်းတွေရေးပေတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အပိုင်း ၂ ကိုမျှော်နေပါတယ်
ကိုကြီးပေါက အီလက်ထရွန်းနစ်ကဆိုတော့ မေဂျာတူ ကျွန်တော်တို့နောင်တော်ကြီးပေါ့။ ဒါနဲ့ စာဂျပိုးလိုလိုကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ နောက်က ဘာလိုလိုဆိုတာက ဘာလဲမသိဘူး။း)
ဘောလုံးပွဲအကြောင်းက တဟားဟားကို အော်ရယ်နေရတယ်။ မြန်မြန်ဆက်ရေးပါဗျာ။ မဟုတ်ရင် လာအော်နေမှာပဲ။
စာတွေရေးတဲ့ အစ်ကိုကြီး ကျန်းမာပါစေသတည်း
မေမိုးရေ.... ဟုတ်ပါ့။ အမှတ်လွဲသွားတယ်။ ငါးတန်းနဲ့ ခြောက်တန်း မှ အမ်အိုင်တီနဲ့ ပေါင်းလိုက်တာနော်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်း ဟန်သက်က လေးတန်းနှစ်ကတည်းကပြောင်းလာတာကို စိတ်ထဲမှာ စွဲနေလို့ပါ။ ထောက်ပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ။